गायनसङ्गीतमा उज्यालो भविष्य छ – सदस्य सचिव तमोट - A complete Nepali news portal based on news & views
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १९:१८ September 17, 2019 Sanjeep Ghimire
काठमाडौँ, ३१ भदौ । “गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ।।।” जनतालाई उठाउन गाइएको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला ? यसलगायत धेरै प्रगतिशील गीतले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएका छन् । यस गीतले पञ्चायतकालदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो । यस्ता कालजयी गीतका गीतकार श्याम तमोटको नाम भने गीत जति चर्चामा आउन सकेको छैन ।
हाल नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्यामप्रकाश तमोटमा क्रान्तिकारिता मात्र होइन, सरलता र शालीनता उत्तिकै छ । उनको गीत नेपाललगायत विश्वका १७ भाषामा अनुवाद भएर विश्वभर क्रान्तिकारी जनताबीच गुञ्जिरहेको छ । उनै गीतका सर्जक तथा सङ्गीतकार तमोट केही वर्षअघिसम्म भोजपुरको दाँवाँमा एक साधारण शिक्षकका रुपमा जीवन व्यतीत गरिरहएका थिए । पाँच वर्षदेखि मात्र काठमाडौँमा बस्दैआएका तमोटसँग तीर्थ भट्टराईले गरेको अन्तरङ्ग कुराकानीको सम्पादित अंश ः (तस्वीरः नवीन पौडेल)
पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो ) विवाह कोसँंग र कहाँ भयो ?
राल्फामा रामेश, रायन, मञ्जुल, रेमन ९लक्ष्मी कोइराला०, नोरेम ९हरि श्रेष्ठ०, निनु चापागार्इँ, विमल चापागाइँ, प्रदीप नेपाल (सिरोज, सोनोभ), अरिम आदि हुनुहुन्थ्यो ।
प्रसिद्घि देशभर अझ विदेशमा पनि भए पनि किन राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएन रु के तपार्इँलाई सांसदको टिकट दिइएन ? या प्रयासै गर्नुभएन ?
हाल यहाँका गीतको सङ्ख्या कति पुग्यो रु आफ्ना मन पर्ने गीतहरु कुन कुन हुन् ?
भारतीयलाई छोरो बनाई नेपाली नागरिकता दिलाउने वडाध्यक्ष पक्राउ
बिरामी बोकेको ट्याक्सीे बगायो